26 “‘Monnyɛ anyamehunu,+ ahoni,*+ anaa abosom adum biara. Na mommfa ɔbo nnsen ohoni biara+ nnsi mo asase so nnsom no,+ efisɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn. 2 Monhwɛ sɛ mubedi me homeda;+ munsuro nni me kronkronbea no ni. Mene Yehowa. 3 “‘Sɛ mokɔ so di m’ahyɛde ne me mmara so na moyɛ ne nyinaa+ a, 4 me nso mɛma osu atɔ ne bere mu,+ na asase no bɛma ne nnɔbae,+ na wuram nnua asow aba pii.+ 5 Na mobɛporow mo awi akosi bere a mobɛtetew bobe aba, na mobɛtetew bobe aba akosi bere a mubedua ade, na moadidi amee+ na moatena mo asase so dwoodwoo.+ 6 Na mɛma asomdwoe aba asase no so,+ na mobɛda a obiara renyi mo hu.+ Mɛhwɛ sɛ aboa bɔne biara remma asase no so,+ na obiara rentwe nkrante wɔ mo so.+ 7 Mubetiw mo atamfo+ na wɔatotɔ nkrante ano wɔ mo anim. 8 Mo mu baanum betiw nnipa ɔha, na mo mu ɔha atiw mpem du, na mo atamfo atotɔ nkrante ano wɔ mo anim.+ 9 “‘Mɛhwɛ mo,+ na mɛma moawo ama mo ase atrɛw,+ na medi apam a me ne mo ayɛ no so.+ 10 Mubedi afe a atwam no nnɔbae dedaw no,+ na mubeyi dedaw no afi hɔ na moanya baabi de foforo no agu. 11 Na mede me ntamadan besi mo mu,+ na mo ho renyɛ me kra abofono.+ 12 Mɛnantew mo mu ada me ho adi sɛ mo Nyankopɔn+ na mo nso moayɛ me man.+ 13 Mene Yehowa mo Nyankopɔn a oyii mo fii Egypt nkoasom mu+ no. Me na mibubuu mo kɔndua mu ma mutumi maa mo ti so nantewee.+ 14 “‘Na sɛ moantie me anyɛ nea mahyɛ nyinaa,+ 15 na mopo m’ahyɛde,+ na m’atemmusɛm yɛ mo kra abofono, na moanni me mmara nyinaa so na mubu m’apam so+ a, 16 ɛnde me nso mɛyɛ nea edi so yi de atwe mo aso: Mede nsamanwaw+ ne atiridii bɛbɔ mo na mo aniwa asɛe+ na mo kra agurow.+ Mubedua aba nanso ɛbɛyɛ adwumahunu, efisɛ mo atamfo na wobedi.+ 17 Na mɛma m’ani asã mo, na mubedi nkogu wɔ mo atamfo anim.+ Wɔn a wokyi mo betiatia mo so,+ na mubeguan bere a obiara mpam mo.+ 18 “‘Na sɛ eyinom nyinaa akyi moantie m’asɛm a, ɛnde mɛma mo bɔne ho asotwe abu abɔ ho mpɛn ason.+ 19 Mebubu ahantan a ayɛ mo kokuroo no, na mɛma mo soro ayɛ sɛ dade+ na mo asase ayɛ sɛ kɔbere. 20 Mo ahoɔden bɛsɛe kwa, efisɛ mo mfuw remma ne nnɔbae+ na asase so nnua rensow aba.+ 21 “‘Na sɛ mokɔ so ne me di asi na moantie me a, mɛma ɔhaw a mede bɛba mo so no abu abɔ ho mpɛn ason sɛnea mo bɔne te.+ 22 Na mɛma wuram mmoa bɔne aba mo so+ na wɔakunkum mo mma+ ne mo nyɛmmoa, na mo so behuan na mo akwan asɛesɛe.+ 23 “‘Nanso sɛ eyinom nyinaa akyi moamma kwan amma manteɛ mo so,+ na mokɔ so ne me di asi a, 24 ɛnde me nso me ne mo bedi asi,+ na mo bɔne nti mɛtwe mo aso mpɛn ason.+ 25 Na mede nkrante bɛba mo so abetua bɔne a moayɛ atia apam no so ka,+ na mubeguan akɔ mo nkurow mu na mama ɔyaredɔm atew asi mo mu,+ na wɔde mo ahyɛ ɔtamfo nsa.+ 26 Sɛ mibubu nnua a mokora paanoo wɔ so no+ a, mmea du bɛtõ paanoo wɔ fononoo biako mu na wɔakari paanoo ama mo,+ na mubedi nso moremmee.+ 27 “‘Na eyi nso moantie me na mokɔ so ne me di asi+ a, 28 ɛnde me ne mo bedi asi denneennen,+ na mo bɔne nti matwe mo aso mpɛn ason.+ 29 Mobɛwe mo mmabarima ne mo mmabea nam.+ 30 Na mɛsɛe mo sorɔnsorɔmmea+ ne aduhuam ade na mede mo afunu agu mo abosom fĩ no afunu so.+ Mo ho bɛyɛ me kra abofono.+ 31 Na mede mo nkurow bɛma nkrante+ na masɛe mo kronkronbea,+ na merente mo afɔre hua.+ 32 Mɛma asase no ada mpan+ na mo atamfo a wɔbɛba abɛtena so no ho bedwiriw wɔn.+ 33 Na mɛbɔ mo apete amanaman mu+ na matwe nkrante adi mo akyi.+ Mo asase bɛsɛe+ na mo nkurow adan amamfõ. 34 “‘Bere a mowɔ mo atamfo man mu a mo asase da mpan no, asase no bɛhome de atew ne ka nyinaa. Saa bere no asase no bɛhome na ahome nea ɛkaa mu nyinaa.+ 35 Nna a ɛbɛda mpan nyinaa ɛbɛhome, efisɛ bere a mote so no, sɛ edu mo homeda a ɛsɛ sɛ asase no home a, ɛnhome. 36 “‘Na wɔn a wɔbɛka no,+ mɛma ehu aka wɔn koma wɔ wɔn atamfo nsase so, na ahaban mpo yɛ kyekyerɛ a, wobeguan te sɛ nea nkrante di wɔn akyi, na wɔbɛhwehwe ase bere a obiara nni wɔn akyi.+ 37 Na bere a obiara ntaa wɔn so mpo no, wobetiatia wɔn ho abubu afa so te sɛ nea wɔreguan afi nkrante ano, na morennya ahoɔden a mode begyina mo atamfo anim.+ 38 Mubewuwu amanaman no mu+ na mo atamfo asase amene mo. 39 Na wɔn a wɔbɛka no, wɔn ankasa bɔne a wobedi wɔ mo atamfo asase so ne wɔn agyanom bɔne+ nti, wɔbɛsɛe+ te sɛ wɔn ara. 40 Afei wɔbɛka wɔn ankasa bɔne+ ne wɔn agyanom bɔne ne wɔn amumɔyɛsɛm, sɛnea wɔne me dii asi+ no. 41 Enti na me nso me ne wɔn dii asi+ na mede wɔn kɔɔ wɔn atamfo asase so no.+ “‘Ebia saa bere yi de, wɔbɛma wɔn koma a wontwaa no twetia+ no abrɛ ase+ na wɔatua wɔn bɔne so ka. 42 Afei mɛkae apam a me ne Yakob yɛe,+ ne apam a me ne Isak yɛe,+ ne apam a me ne Abraham yɛe+ no, na mɛkae asase no. 43 Bere a wɔagyaw asase no ato hɔ na wɔretua wɔn bɔne so ka no, asase no nso bɛhome de atew ne ka+ bere a adan amamfõ no. Wobetua wɔn bɔne so ka+ efisɛ wɔapo m’atemmusɛm+ na m’ahyɛde yɛ wɔn kra abofono.+ 44 Nanso bere a wɔwɔ wɔn atamfo asase so mpo no, merempo wɔn+ koraa na meremmu wɔn sɛ abofonode+ a enti mɛtɔre wɔn ase. Merenyɛ saa na mammu apam a me ne wɔn ayɛ no so,+ efisɛ mene Yehowa wɔn Nyankopɔn. 45 Mɛkae apam a me ne wɔn nananom yɛe no;+ wɔn na miyii wɔn fii Egypt asase so wɔ amanaman no anim+ de kyerɛe sɛ mene wɔn Nyankopɔn. Mene Yehowa.’” 46 Eyinom ne ahyɛde ne atemmusɛm+ ne mmara a Yehowa nam Mose so de too ɔne Israelfo ntam wɔ Bepɔw Sinai so.+
Hwɛ Ex 20:4 ase hɔ asɛm.